Ngathi-i-Ningbo Fkidz Ergonomics Limited
I-Ningbo Fkidz Ergonomics Limited inobungcali ekuyileni nasekwenzeni idesika ye-ergonomic kunye nosihlalo wabantwana nakwishumi elivisayo. Ukusuka kwi-R & D ukuya kulungelelwaniso nasemva kokuthengisa, sinenkqubo epheleleyo yolawulo kunye neqela lenkonzo yobungcali. I-R & D, imveliso, ulawulo lomgangatho kunye nentengiso ye-Fkidz ibijongene nomzi mveliso wefenitshala yabantwana kangangeminyaka eli-10 +, enokunika abathengi imveliso ekumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yobungcali.
Iimveliso zethu azithengisi ngempumelelo kuphela e-China, zikwathengisa ne-US, iJamani, i-UK, i-Russia, i-Korea, i-Singapore, njl., Kumazwe angaphezu kwama-30 kunye nemimandla esehlabathini.
Njengengcali yefenitshala yabantwana ye-ergonomic, uFkidz uzibophelele ekunikezeleni ngezisombululo zemveliso ezingcono kunye nezingcono kubathengi bethu, kunye nokwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu.
Umsebenzi wethu kukunceda abantwana / abakwishumi elivisayo ukuba bagcine imeko echanekileyo kunye esempilweni ngelixa bekhula. Sigxila kwiinkcukacha ezikhokelela kwimikhwa engcono kunye nomsebenzi owandileyo okhokelela kubomi obunempilo.
Sixhasa imveliso ebalaseleyo, ixabiso kukhuphiswano kunye nenkonzo ebalaseleyo kubathengi bethu, ukunceda abathengi bethu baphumelele kuqoqosho lweli hlabathi olutshintshayo.
Iminyaka eli-10 + iqela elinamava kwifenitshala ye-ergonomic yabantwana
Uluhlu olupheleleyo lwemveliso, ukubonelela ngenkonzo yokuma kwindawo enye kumthengi
Umgangatho ozinzileyo kunye nenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa, umngcipheko omncinci kubathengi bethu
Qhubeka nokwakha ubudlelwane bexesha elide kunye namaqabane ethu